Ny tsy fahampian'ny singa dia hisy fiatraikany amin'ny iPhone 13 sy iPad | Vaovao IPhone
Ny tsy fahampian'ny singa dia hisy fiantraikany amin'ny iPhone 13 sy iPad
Luca Maesteri, dia nanontaniana momba ny tsy fahampian'ny famatsiana ho an'ny iPhones sy iPad manaraka, amin'ny kaonferansa valim-bola isan-taona. Maesteri, nanazava fa mailo ny Apple amin'ny mety tsy fahampian'ny famatsiana ary izany ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fiatraikany amin'ny iPhone ary indrindra ny iPad mandritra ny volana septambra ho avy izao.
Azo atao izany ny tsy fahampiana hita nandritra ity telovolana ity dia lehibe kokoa amin'ny volana septambra Naneho hevitra i Maestri. Midika izany fa mety hisy fiatraikany amin'ny vokatr'izy ireo ny fameperana ary antenaina fa hanao izany amin'ny fomba lehibe kokoa amin'ny iPad izy ireo noho ny amin'ny iPhone 13.
Ny andrasan'i Apple dia tsy maintsy jerena hatrany
Tsy misy olona azo antoka kokoa noho ny orinasa mihitsy Ary ny fahafantarana ny antsipiriany momba ny habetsaky ny vokatra azo amidy na amboarina mandritra ny telovolana, Apple no manome valiny. Mazava fa milalao ny karany i Apple ary tsy haneho fahalemena fa marina fa mijaly amin'ny tsy fahampian'ny singa noho ny antony maro samihafa ity sehatra ity, ao anatin'izany ny valanaretina COVID-19 izay misy fiatraikany amin'ny planeta iray manontolo.
Na izany na tsy izany, andao hanantena fa tsy hihemotra ny iPhone 13 satria nitranga ny fametrahana ny maodely iPhone 12 amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fizarana azy ireo. I Tim Cook mihitsy no nanazava izany miasa mafy hisorohana ny olana amin'ny rojom-panolorana sy ny lozisialy. Etsy ankilany, ny singa sasany izay mampiasa silika dia mety hijaly koa noho ny fameperana. Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny indostria iray manontolo izany rehetra izany ary mazava ny Apple fa ho sarotra izany nefa tsy azo atao ka manery ny milina hisoroka ny olana arak'izay tratra izy ireo. Ho hitantsika eo ny zava-mitranga aorian'ny fialantsasatry ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny tsy fahampian'ny singa dia hisy fiantraikany amin'ny iPhone 13 sy iPad
Ampiasao ny "Vakiteny votoaty" mba hamakian'ilay iPhone ny efijery aminao
DuckDuckGo dia manolotra ny fitaovany manokana hanalavirana ireo mpanara-maso mailaka